Man City Oo £225 Milyan U Diyaarsatay Kane iyo Grealish – Garsoore Sports
Man City Oo £225 Milyan U Diyaarsatay Kane iyo Grealish
Kooxda Manchester City ayaa weli lugaha kula jirta loolanka loogu jiro saxiixyada xiddigaha xulka Ingiriiska ee Harry Kane iyo Jack Grealish xilli The Sun ay warineyso in The Cityzens ay bangiga u jebineyso siddii ay laacibiintan ku heli lahayd.
Manchester City ayaa diyaar u ah inay sameyso huritaan lacageed oo weyn oo ay ku dooneyso inay kusoo xerogeliso Jack Grealish iyo Harry Kane xagaagaan, sida ay sheegayaan wararka. Pep Guardiola ayaana raadinaya inuu kooxdiisa sii adkeeyo kahor xilli ciyaareedka 2021/22.
Cayaaryahan Bernardo Silva ayaa qarka u saaran inuu ka tago City si uu gacan uga geysto lacag u uruurinta imaatinka Grealish iyo Kane.
26 jirkaan ayaa xilli ciyaareed adag qaatay ololihii 2020/21 wuxuuna ku dhibtooday inuu boos joogto ah ka helo kooxda hanatay Premier League ee macalin Guardiola.
Iyadoo Guardiola uu doonayo inuu beddelo muuqaalka weerarkiisa xilli City ay dooneyso ku guuleeysiga Champions League-ga, Bernardo ayaa laga yaabaa inuu noqdo xubin kooxda ka tirsan oo haatan seefta galka loogala baxayo.
Sida laga soo xigtay The Sun, City waxay u baahan tahay inay iska dirto hal xiddig si ay ugu maalgeliso labadooda xiddig ee xiisaha ay u qabaan ee Grealish iyo Kane.
Warbixinta ayaa sheegeysa in ciyaaryahanka su’aasha laga qabo ay u badan tahay inuu noqdo qadka dhexe reer Portugal, Bernardo Silva.
Kane ‘wuxuu diyaar u yahay inuu dhammeystiro heshiis rikoor British ah oo gaaraya 160 milyan ginni oo uu ugu dhaqaaqayo Etihad Stadium, imaatinka Grealish wuxuu qaadan doonaa qiyaastii 65 milyan oo ginni isku darka lacagta loo baahan yahay ee 225 milyan.
Si kastaba ha noqotee, The Sun ayaa sheegaysa in City aysan ku tiirsanaan doonin inay iibiso xiddigo badan oo kooxda koowaad ah sababtoo ah ciyaartoydii ugu dambeysay ee kooxda ka tagtay ayaa si tartiib tartiib ah u kordhiyay qasnada kooxda Guardiola.
Tuchel: “Qaar Ayaa Raba Inay Baxaan”
Rasmi: Liverpool Oo Heshiis Cusub Ka Saxiixatay Conor Bradley